Misy fetra ny zava-drehetra… | NewsMada
Misy fetra ny zava-drehetra…
Iza na inona, hono, no nandresy tamin’ny fandaniana amboletra ny lalàna mifehy ny fifidianana… mampikorontana? Lazain’ny fitondrana fa ny demokrasia. Ny maro indray, mahita fa ny kolikoly sy ny fandikan-dalàna… Hisy sy hilamina ve ny fifidianana amin’ny lalàna tsy eken’ny rehetra?
Hanao ny ataony hatrany amin’ny letrezana ny mpitondra, na iza hiteny na iza tsy faly. Atao avokoa izay fomba rehetra handresena amin’ny fifidianana? Efa nitranga tamin’ny fifidianana kaominaly sy senatorialy tao anatin’izao fitondrana izao ny kolikoly, ny hosoka, ny hala-bato, ny tsy fanarahan-dalàna…
Amin’izany rehetra izany, eo ny fiheveran-tena ho matanjaka indrindra. Tsy misy toa azy: mahay politika, mahafehy ny raharaha, mahazaka vahoaka, mahatondra fanjakana… Atao ihany ny atao amin’ny tsy fanarahan-dalàna, lehibe tsy meloka, fanjakan’ny tsimatimanota, fampandriana adrisa…
Ho tonga hatraiza? Hatramin’izao, mangina sy tsy mihetsika ny vahoaka… tsy zazabodo na bado: manara-maso, mandinika, manapa-kevitra. Izay fanginana sy tsy fihetsehana hoe fahendrena, hono, no hararaotina amin’ny fanamparana hery sy fahefana, vola sy kolikoly, lainga sy fitaka… ?
Mandra-pahoviana? Antomotra ny fifidianana. Arakaraka ny mahakaiky izany no isehoan’ny sasany amin’ny tena endriny? Lehibe tsy meloka, tsy toheri-mandidy… Vokany, eo hatrany ny fifampiahiahiana, fifampiandaniana, fifampiandrasana kendry tohina… Hilamina ve ny fifidianana amin’izany?
Efa izao iaraha-miaina izao ny rivotra fohina, manempotra ahiahy. Ady amin’ny adala ka ny tena no menatra? Vao mainka hanao ny ataony hatrany… “Valio ny adala araka ny hadalany, fandrao dia manao azy ho hendry izy”, hoy ny Ohabolana 26: 5 izay. Na hoe mety avokoa izay ataony rehetra, tsy misy fetra.
Misy fetrany ny zava-drehetra mba tsy hivarinana an-kady na amina korontana. Inona no hatao? Tsy vitan’ny fanasana tanana, na fihalangalanana hiafara amin’ny latsa… Tsy izao ve no ilàna ny fifanatonana sy fifampidinihana? Tsy maintsy hiafara amin’izay tsinona, raha sanatria tonga tokoa ny tokoa.